* Click on the picture to seealarger image. ပုံကြီးကြည့်လိုပါကအထက်ပုံပေါ်တွင် click လုပ်ပါ။ Jam - The Web Design Company That Teaches You English 1. Saying what you are doing (လောလောဆယ် ကိုယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို ပြောချင်ရင်) Jam ဆိုတဲ့ ကာတွန်း အစီအစဉ်ကတော့ ဗြိတိသျှကောင်စီရဲ့ LearnEnglish Professionals website တွေမှာဖော်ပြထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုအတွဲများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတိုလေးတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကို Jam လို့အမည်ရတဲ့ Web Design ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့နေ့စဉ်ရုံးတွင်းကိစ္စလေးတွေနဲ့ သရုပ်ဖော်ပြထားပြီး သရုပ်ဆောင်များရဲ့ ပြောစကားကနေ အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ IT ပတ်သက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းလေးတွေပါ လွယ်လွယ်ကူကူ ရသွားအောင် စီစဉ်ထားတာပေါ့။ အခုတစ်ပါတ်မှာတော့ လောလောဆယ်ကိုယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို ပြောဖို့ "Saying what you are doing" ကို တင်ပြထားတယ်။ ကြည့်ရအောင်နော်။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ သရုပ်ဆောင်သုံးယောက်ပါတယ်။ Office manager ဖြစ်တဲ့ Maria ရယ်၊ Designer ဖြစ်တဲ့ Jeff ရယ်နဲ့ ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Alison ရယ်ပေါ့။ ပထမအကွက်မှာ Maria က Jeff ကို လှမ်းပြောနေတာပါ။ သူတို့ကို အလုပ်အပ်ထားတဲ့ World Records ကုမ္ပဏီက web pages တွေ ပြီးမပြီး ဖုန်းနဲ့ လှန်းမေးနေကြောင်းပေါ့။ Jeff က ဘာပြောသလဲ။ ကျွန်တော် အခု အဲဒါကို လုပ်နေပါပြီ၊ ဒီနေ့အပြီးရမယ်လို့။ တတိယအကွက်မှာ Maria က ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Alison ကို ခဏလောက်အချိန်ပေးနိုင်မလား မေးတော့ Alison က အားဘူးတဲ့။ Report ကို အပြီးသတ်နေရလို့တဲ့။ နောက်တစ်ခါ ထပ်မေးပြန်ပြီ။ Jeff ကလဲ သူ့ကို ကူပါဦးတဲ့။ ဒီတော့ Alison က အချိန်ပေးနိုင်လား။ ကူပေးနိုင်လား။ ဟင့်အင်း။ သူမအားဘူး။ အလုပ်များလွန်းလို့။ အခု အလုပ်ကြော်ငြာ ရေးနေတာ။ နောက်ထပ် Web Designer တစ်ယောက်လိုနေပြီတဲ့။ အဲဒီတော့ လောလောဆယ်ကိုယ် ဘာလုပ်နေလဲ ဆိုတာကို သူတို့ဘယ်လို ပြောသွားကြသလဲ။ Jeff: I'm working on them now. Alison: I'm finishing this report. Alison: I'm working onajob advert to go in the paper. အဲဒါကို ခွဲခြမ်းလေ့လာကြရအောင် - ကဲ၊ မလွယ်လား။ ပြောစကားဆိုရင်တော့ I am မဟုတ်တော့ပဲ I'm ဖြစ်သွားတာပေါ့။ အခု ဇာတ်လမ်းထဲက သူတို့ ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာ ရေးကြည့်ပါဦး။ Jeff..... Jeff is working on web pages. Alison.... Alison is finishing the report. ..... Alison is writingajob advert. Maria..... Maria is trying to talk to Alison. အခုဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်နားက သူတွေ လောလောဆယ် ဘာလုပ်နေလဲ ဆိုတာရေးတက်၊ ပြောတက်ရောပေါ့။ နဲနဲလောက်ရေးကြည့်ပါလား။ ဥပမာ - အခုအလုပ်ကို သွားနေတယ်။ (I'm travelling to work) ကျွန်တော့ညီမ ကောလိပ်ကျောင်းတက်နေတယ် (My sister's studying at college) စသဖြင့်ပေါ့။ နောက်ထပ်မှတ်သားစရာ အင်္ဂလိပ်စာ (သူတစ်ပါးရဲ့ အချိန်/ အကူအညီကို တောင်းရင်) ကျွန်တော့်ကို အချိန်နဲနဲ ပေးမလားဆိုရင် ဆိုရင် Have you gotamoment? Have you gotaminute? ကျွန်တော့ကို ကူပေးနိုင်မလားဆိုရင် Can you help me foramoment?
Sorry, I'm finishingareport. Sorry, I'm busy. Happy learning English! ပျော်ရွှင်ပေါ့ပါးစွာ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူနိုင်ပါစေ။ [ Daw May May Win, MA (English) (YU), MA (TESOL) (Lancaster University) မှ မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုရေးသား ထားပါသည်။ ]
J@M - Episode 1 - Saying what you are doingJ@M - Episode2- Applying forajobJ@M - Episode3- Arranging and interviewJ@M - Episode4- An InterviewJ@M - Episode5- Meeting New PeopleJ@M - Episode6- Daily RoutineJ@M - Episode7- Discussing ProjectsJ@M - Episode 8 - MeetingaClientJ@M - Episode9- InaRestaurantJ@M - Episode 10 -Talking About Health J@M - Episode 11 - Making SuggestionsJ@M - Episode 12 - GivingaPresentationJ@M - Episode 13 - Thinking About the FutureJ@M - Episode 14 - Maria's StoryJ@M - Episode 15 - At the AirportJ@M - Episode 16 - Booking intoaHotelJ@M - Episode 17 - Making AppointmentsJ@M - Episode 18 - Talking about PeopleJ@M - Episode 19 - Talking about Likes and DislikesJ@M - Episode 20 - Office ActivitiesJ@M - Episode 21 - MakingaRequestJ@M - Episode 22 - Finding out aboutaCourseJ@M - Episode 23 - Travelling by TrainJ@M - Episode 24 - Asking DirectionsJ@M - Episode 25 - Giving PraiseJ@M - Episode 26 - ComplainingJ@M - Episode 27 - Telling Bad NewsJ@M - Episode 28 - Talking about FinanceJ@M - Episode 29 - Talking about your LifeJ@M - Episode 30 - Making an ArrangementJ@M - Episode 31 - Advice and ObligationJ@M - Episode 32 - Sorting out ProblemsJ@M - Episode 33 - SendingaParcelJ@M - Episode 34 - Jeff's StoryJ@M - Episode 35 - Offering SomebodyaJobJ@M - Episode 36 - Giving AdviceJ@M - Episode 37 - Talking About MoneyJ@M - Episode 38 - ProfessionsJ@M - Episode 39 -Talking about Money (2) Tags:
Like 287 members like this
Permalink Reply by Saw Htwe Aung on September 20, 2016 at 11:51 Thank you for your lessons.
Permalink Reply by thwe thwe phyo on March 28, 2012 at 16:50 Tksalot
Permalink Reply by 1xkodhsmioy88 on March 29, 2012 at 18:32 thank you
Permalink Reply by Aung Phyo Htike on April 6, 2012 at 12:36 Thanks
Permalink Reply by win win shwe on April 10, 2012 at 14:25 Thanks.
Permalink Reply by thesu on May 6, 2012 at 18:48 I would like to thank you because this is very helpful for me . I will try my best to study hard.
Permalink Reply by Zaw Win on May 30, 2012 at 16:01 Thank you very much.
Permalink Reply by 1gnngd5xpprmc on June 3, 2012 at 12:05 Thank you
Permalink Reply by seinseinsint on June 19, 2012 at 21:01 Thanksalot .
Permalink Reply by khinthidasoe on June 24, 2012 at 7:25 thank
Permalink Reply by khinthidasoe on June 24, 2012 at 10:18 thank
Permalink Reply by 29a6k549qdbrt on June 24, 2012 at 18:52 thank u , teacher.